Zikhonkotha ehambayo, uNongoma awuzukuma - Bayede News
Home » Zikhonkotha ehambayo, uNongoma awuzukuma
Into eqale njengomkhankaso wokujivaza abantu kanjalo noMkhandlu uNongoma isiphenduke ivuso ebuholini bendawo. Indaba iqalwe yimibiko engelona iqiniso ngomklamo wendawo yokuwela abantu, impahla nezimoto neyakhelwe umphakathi waseNzondwane naseNdongane. Lapha abaphehli bozwathi bebethi lo mklamo kawukho ezingeni. Lokhu iMeya yakwaNongoma, iKhansela uMncwango lithe selihlale kakhulu kupolitiki ukwazi ukuthi izimbangi zipaquza kanjani uma zibona iqembu elinye lenza kahle.
“Cishe sengibe kupolitiki isikhathi eside kakhulu ukuqonda umdlalo odlalwa zimbangi uma kukhona lapho ziphazamiseka khona. Lokhu nje kusho khona ukuthi ukwenza kwethu akuyiphethe kahle imbodla. Kuyihlazo kwakhona ukuthi lesi sigcino ngabantu bakwaNongoma siqhamuke kubantu abasezikhundleni kuHulumeni naseqenjini elibusayo okumele ngabe babambisana nathi ekuthuthukiseni imiphakathi yasemakhaya,” kusho uMpangazitha.
IMeya ithe ngendlela abangenaxhala ngayo imema ngisho abanamandla okwenza uphenyo ukuba basondele ukuzobheka ukuthi kukhona yini okube nechashazi.
“Ukube kuya ngami ngabe sekukhona abathi bazophenya. Phela imikhuba le esike sizwe kuthiwa yenzeka kweminye imizi yiyo ebulala isithunzi sepolitiki kuleli. KwaNongoma le mikhuba kayigilwa futhi ngeke igilwe muntu sikhona njengobuholi.
Iqhubeke yathi isono sakhe neqembu lakhe elibusa kwaNongoma sinye: “Akudingi ngikhumbuze abantu baseNingizimu Afrika ukuthi iqembu elibusa kwaNongoma linezingxabo zalo emiphakathini yasemakhaya. Cishe bonke abaholi balo, kubalwa uMntwana waKwaPhindangene noMengameli wethu uHlabisa bazalelwe emakhaya. Mina qobo ngizalwe lapha kwaNongoma. Kuyisono-ke kwabanye abangayazi le mpilo nxa siqala sifukula abantu basemakhaya njengoba lo mklamo uhlosile,” kusho iMeya.
UMncwango uqhube wathi lo mklamo uyingxenye yomkhankaso wokwakhiwa kwengqalasizinda ebandakanya amabhuloho, izinkundla zemidlalo, amahholo omphakathi nokunye. “Kumanje sesiqede imiklamo eli-12 ngemali eyizigidi ezingama-31 kubalwa nalo esesijivazwa ngawo, kubhubhudlwa amanga.”
IMeya iphethe ngokuthi uhlelo lwabo wukuguqula ubuso bukaNongoma ngokuqinisekisa ukuthi kunengqalasizinda esezingeni elamukelekile nephephile.
“Mina nje engazi ukuthi uma kunezimvula kwenzakalani ngabantu nempahla. Engaziyo ukuthi ngisho kuyolandwa ogulayo kuba umqansa ongakanani, lo mklamo wenza inhliziyo yami yethabe ngilale ubuthongo ngoba kukhona umehluko esiwenzile emphakathi wakwaNongoma nosemakhaya, lokhu sikwenza ngobala lolu esixhaswa ngalo. Kimi abantu bakwaNongoma njengabakhokhi bentela bafanelwe ngokungcono,” kuphetha uMncwango.
Bayede News Dec 11, 2020